တတိယအိမ်နီးချင်း | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » My Dear Diary » တတိယအိမ်နီးချင်း
Posted by koyin sithu on Feb 5, 2012 in My Dear Diary, Short Story, Think Different | 31 comments
တတိယအိမ်နီးချင်း အကြောင်းကို ပြောပြရန် လိုပါသည်။ ထိုအိမ်နီးချင်းသည် ကျွန်ုပ်၏အိမ်နှင့် ကပ်လျက်အိမ်ကို ဝယ်ပြီး အိမ်သစ်ပြင်ဆောက်၍ နေသောသူ ဖြစ်၏။ သူ၏အမည်မှာ ကိုစိန်ဖေဟူ၍ ဖြစ်၏။ သူသည် မူလတန်းကျောင်းအုပ် လုပ်ခဲ့ဖူးသည်ဟု သိရ၏ စကားပြောလျှင် သူ့ကိုယ်သူ “ဆရာတို့က” ဟု ခေါင်းစဉ်တပ်၍ ပြောလေ့ရှိ၏။ သူသည် အိမ်ပြင်၍ ဆောက်သောအခါ၌ ကျွန်ုပ်၏မြေကို ခြောက်လက်မ ခိုး၍ ဆောက်လေ၏။ သူ၏ အိမ်ခေါင်းရင်းတွင်လာ၍ ဆောက်သူကလည်း သူ့ထံမှ မြေခြောက်လက်မကို ခိုးယူ ပြန်၏။
ထိုအခါ၌ ဦးစိန်ဖေသည် မခံမရပ်ဖြင့်ကာ မြေတိုင်းစာရေးကို ခေါ်၍ မြေတိုင်းလေတော့၏။ ခြောက်လက်မ ခိုးယူထာကြောင်း ထင်ရှားလျှင် ဦးစိန်ဖေက ရပ်ကွက်လူကြီးများကို ပြသတိုင်းတန်းလေတော့၏။ ထို့ကြောင့်သူ၏ ခေါင်းရင်းအိမ်မှ လူသည် ရေတံလျှောက် ကြီးကို ဖြတ်ပစ်လိုက်ရ၏။ ပြတင်းပေါက်မှ တံခါးများကို အသေပိတ်ပစ်လိုက်ရ၏။ ပြတင်းပေါက်ပေါ်တွင် လုပ်ထားသော ဆန်းရှိတ်ပင် ဖြိုချပစ်လိုက်ရ၏။ ထိုကိစ္စများ ပြီးသွားသောအခါ၌ ကျွန်ုပ်မှာလည်း ဖဲဝိုင်း မရှိသောကြောင့် အားလပ်နေသည်ဖြစ်ရာ တစ်စုံတစ် ယောက်ကို ပြဿနာရှာဦးမှပဲဟု တွေးကာ မြေတိုင်းစာရေးကို ခေါ်၍ မြေတိုင်းခိုးလေတော့၏။
ထိုအခါ ဆရာဦးစိန်ဖေသည် ကျွန်ုပ်ထင်သကဲ့သို့ ကျွန်ုပ်၏ မြေကို ခြောက်လက်မ ခိုးထားခြင်းမဟုတ် တစ်ပေတိတိ ခိုးထားကြောင်းတွေ့ရလျှင် ကျွန်ုပ်လည်း ရပ်ကွက် လူကြီးများကို ပြသ၍ တိုင်းတန်းရလေ၏။ ဓာတ်ပုံများ ရိုက်ကူး၍ မှတ်တမ်းတင်ရလေ၏။ ဆရာဦးစိန်ဖေသည် မျက်ဖြူဆိုက်နေပြီ ဖြစ်၏။ သူ၏ ခေါင်းရင်းအိမ်မှ လူကို လုပ်သကဲ့သို့ ကျွန်ုပ်က သူအား လုပ်ရပါမူသူ၏ အိမ်နံရံ တစ်ချပ်လုံး ဖြိုချပစ်ရမည် ဖြစ်၏။ ထိုအဖြစ်ကို ကြားလျှင် ဦးစိန်ဖေ၏ ခေါင်းရင်းအိမ်မှလူသည် ကျွန်ုပ်အိမ်သို့ မဖိတ်ခေါ် ရပါပဲလျက် လာ၍လည်၏။
ထို့နောက် ထိုသူက “မိတ်ဆွေကြီး အမှုကို ကျုပ်ဝယ်ချင်လိုက်တာဗျာ၊ ဘာမှမဟုတ်ပါဘူး၊ ဒီလူကြီးကို နှိပ်စက်ချင်လို့ပါ” ဟု ပြောင်ပြောင်တင်းတင်းပြောလေ၏။ ကျွန်ုပ်ကလည်း ထိုလူကြီးအား “ဆရာတို့က ဆရာတို့က ” ဟု ပြောလေ့ရှိသည်ကို နားကလောနေရကား ကျွန်ုပ်အမှုကို မရောင်းနိုင်ပေ၊ ရှိုးသမား စကားဖြင့် ပြောရပါမူ ဒီတစ်လှည့်တွင် ရှိသမျှပုံ၍ ရှိုးရမည့်အလှည့် ဖြစ်၏။
ကျွန်ုပ်သည် ဦးစိန်ဖေကြီးအား.. “ ဘယ်လိုလဲ ဆရာကြီး” ဟု မေးလိုက်ရာ ဦးစိန်ဖေကြီးက “ကျုပ်လဲ မတိုင်းမိဘဲ ဆောက်လိုက်မိပါတယ်ဗျာ၊ အိမ်နီးချင်းတွေပဲ မြေကလေး တစ်ထွာတစ်မိုက်အတွက် နင်လား ငါလား ပြောကြဆိုကြဖို့ မရှိပါဘူး၊ ကျုပ်တို့တောမှာဆိုရင် သူ့မြေကိုယ့်မြေ တစ်လံနှစ်လံဝင်ပြီး ဆောက်ကြတာ” ဟု ပြောလေ တော့၏။ “တောမှာတော့ ဟုတ်ပါလိမ့်မယ် ဆရာကြီး မြို့မှာဆိုတော့ မရဘူ၊ ခြောက်လက်မလောက် ကိုယ့်မြေထဲ ရောက်နေရင် တချို့ ဆိုေ ရတံလျှောက်တွေ ဖြတ်ခိုင်း၊ ပြင်းပေါက်မိုးတွေ ဖြိုခိုင်းလုပ်ကြတာ မဟုတ်လား၊
ခြောက်လက်မဆိုရင်တော့ ကျွန်တော်အနေနဲ့ဘာမှ မပြောပါဘူး၊ အခုဟာက တစ်ပေခင်ဗျ၊ အဲဒီတော့ ကျွန်တော့်အနေနဲ့ မတရားလဲ မလုပ်ချင်ပါဘူး၊ ဆရာကြီး လုပ်တဲ့နည်းအတိုင်းပဲ ကျွန် တော့်မြေ ကျွန်တော် လိုချင်တယ်၊ ကျွန်တော်မြေထဲ ရောက်နေတဲ့ ဆရာကြီးရဲ့ အဆောက်အဦး ဖျက်ပေးဖို့ပါပဲ” ဟု ကျွန်ုပ်က ပြော လိုက်ရာ ဦးစိန်ဖေ၏ မျက်နှာသည် ဝါအဝင်၌ စွန့်ပစ်ခြင်းခံရသော နတ်အုပ်သီးကဲ့သို ရှုံ့တွ၍ သွားလေတော့၏။ အိမ်ကို ဖျက်ပစ်ရန် အခက်အခဲရှိသော ဆရာဦးစိန်ဖေသည် ကျွန်ုပ်အား ငွေသုံးသောင်း အလျှော်ပေးရတော့၏။
ကျွန်ုပ်၏မြေတစ်ကွက်လုံး ဝယ်လျှင်ပင် သုံး သောင်းနှင့်ပင် ရနိုင်၏။ ယခုမူ မြေတစ်ပေအတွက် ငွေသုံးသောင်းကို ကျွန်ုပ်က လက်ဖြောက်တီး၍ ယူလိုက်လေ၏။ ဦးစိန်ဖေကြီး ကား ကစားလိုက်သည်နှင့် ခါးကျိုးသွားသော ရှစ်သုံးလုံး ဖဲထုပ်နှင့် တူ၏။ ကျွန်ုပ်မှာမူကား ကုလားဖန် ထိုးရခက်သော အေဝမ်းဖဲထုပ်နှင့်တူ၏။ သို့ရာတွင် ကျွန်ုပ်တို့နှစ်ဦးသည် အိမ်နီးချင်းများသာတည်း။
အဘရဲ့ စာပေတွေကို နှစ်သက်ကြတဲ့ ချစ်ခင်ရတဲ့ မိတ်ဆွေများ အလွမ်းပြေဖတ်ဖို့
ပြန်လည်ရေးသားပေးထားပါတယ်ဗျာ… ခုရက်ပိုင်တော့ ကျွန်တော် မွန်ပြည်နယ်ဘက်ကို
ဂန္ဓာရီခရီးထွက်သွားလို့ ရွာထဲခဏ ပျောက်သွားပါတယ်ခင်ဗျာ.. ကျိုက်ထို၊ ကျိုက်ထီးရိုးတောင်နဲ့
နီးစပ်ရာတောင်တန်းတွေကို တစ်ယောက်တည်း ဂန္ဓာရီခရီးထွက်သွားတာပါ…
တောထဲမှာ ၂ညအိပ် တုန်း တောင်တန်းတွေကို ခရီးသွားရင်နဲ့ မမျှော်လင့်ပဲ
တောရ ရသေ့တစ်ပါးကို ဖူးမြော်ခွင့်ရခဲ့ပါတယ်…။ ကျွန်တော်လည်း ၀တ်ပြုရှိခိုးရင်းနဲ့
ဆရာရသေ့က သမုဒယသစ္စာ အကျယ်ကို ကျနော်အား ချီးမြင့်ဟောကြားပေးခဲ့ပါတယ်… ကျနော် ဂန္ဓာရီခရီးထွက်ရင်း
သိရှိနားလည် ကျင့်ကြံခဲ့ရတဲ့ သမုဒယသစ္စာအနက်ကို ဥာဏ်မီသလောက် ရွာထဲမှာ ပြန်လည် မျှဝေရေးသားပေးပါမယ့်ခင်ဗျာ..
ကျနော့် ၃ ကြိမ်မြောက် ဂန္ဓာရီခရီး အောင်မြင်ခဲ့ပါတယ်… အခုလထဲမှာပဲ ကျနော် ပင်လယ်ရပ်ခြားသွားရပါတော့မယ်..။
အလုပ်များလို့ နှုတ်မဆက်ဖြစ်ရင် အားလုံးနားလည်ပေးပါနော့…။ အခုတော့ ရွာထဲမှာ ပြန်လာပြီး ရွာအကျိုးပြန်လည်သယ်ပိုးဖို့
ဒါနဲ့ စကားမစပ်… လေးဖက်တီးနဲ့ ကိုကမ်းကြီးရေ..
ကျနော်တော့ အကိုတို့နဲ့ လဆန်းပိုင်း ချိန်းထားတဲ့ မန်းလေး ခရီးစဉ်ကို လိုက်ဖြစ်မယ်
မထင်တော့ဘူးဗျာ.. မမျှော်လင့်တဲ့ အိပ်မက်ကြောင့် ခရီးထွက်လိုက်လို့ပါ…
အကိုတို့ပဲ မန်းလေးက မိတ်ဆွေတွေနဲ့ တွေ့ပြီး ပျော်ရွှင်စွာဆုံတွေ့ကြပါစေနော်…
ရွာသူားများခင်ဗျာ.. ကျနော် ကျိုက်ထီရိုးသွားရင်း လမ်းတစ်လျှောက်နှင့် တောတောင်ထဲမှ
လိုအပ်နေသော နေရာများနှင့် သံဃာတော်များကို န၀ကမ္မအလှူငွေများ ကျနော်တတ်နိုင်သလောက်ထည့်လှူပေးခဲ့ပါတယ်…
ထိုဒါနကုသိုလ်တရားကို ကျနော်နှင့်ထပ်တူ… ရွာသူားများလည်း ဒါနကုသိုလ်ရကြပါစေကုန်…
ပတ္တိပတ္တာနုမောဒနာ ဆိုတော့ အားရပါးရကြီးကို သာဓု သာဓု သာဓု ခေါ်ပါတယ်ကိုရင်စည်လေးရေ။
ငါ့ညီလည်း သွားလေရာ လာလေရာ ဘေးခပ်သိမ်း ရန်ခပ်သိမ်း ကင်းငြိမ်းပြီး လိုရာပြည့်ပါစေကွာ။
သာဓုပါကိုရင်စည်သွပ်ရေ ဖဲအကြောင်းတော့ နားမလည်လို့မရွှီးတော့ပါဘူး
စကားမစပ် ကောက်ညှင်းနဲ့လုပ်တဲ့ဆနွင်းမကင်း (တစ်ချို့က ရွှေထမင်းလို့ခေါ်တယ်)၊ အဲဒီမုန့်ကို မော်လမြိုင်ဘက်မှာ စိန်ဖေမုန့်လို့ခေါ်တယ်
ကိုရင် စိန်ဖေမုန့်တောင် မမှီဝဲခဲ့ရပါဘူး..
တောထဲမှာ ထမင်းနဲနှင့် ကိုလာလေး မှီဝဲရင်း
ကျိုက်ထိုကို ခရီးဆက်ခဲ့ရသပေါ့… ခရီးရောက်မဆိုက်
မိုးလေး ကိုရင့်ကို စိန်ဖေမဟုတ်တဲ့
ဒိုးနတ်၊ ကီးမား လေးများ ၀ယ်မကျွေးချင်ဘူးလားဟင်…
ဆောတီး ဆောတီး မိုးလေးရဲ့..
ရန်ကုန်မှာ အဟာရပြတ်နေတာ ကိုရင် ကိုယ်
ကိုရင် ပြောဒါဘာဗျာ.. မွှားတွားလို့…
ကိုရင် မိုးဇီး က သူ့ဟာသူတောင်
ဒေါ်စိန်ပေါက် ကို ဘီအီးဖိုး မပေးနိုင်ဖြစ်နေတာ ..
ကိုရင့် ကို ဒိုးနတ် ဘယ်ကျွေးနိုင်လိမ့်မတုန်းဗျာ…။
အာဟာရပြတ်တယ် ဆိုပီး မန္တလေးမှာ ဗိုက်ကားအောင် သွားဝါးမှာ
ဒေါ်ဇာဂိ ခင်ဗျား ကျုပ်ဆီက ယူထားတဲ့ ပါတိတ်ဝမ်းဆက်ဖိုး ဘယ်တော့ပေးမှာတုန်း ပြောတော့လကုန်ဆိုပြီး အခု ၇ ရက်တောင်ရှိပြီ
မုန့် လက်ကောက် မပြောနဲ့မုန့် လက်စွပ်တောင် မကျွေးပဲနေလိုက်မှာ
ပေးလိုက်ပီလေ ကိုမိုးဇီးရဲ့ …
ဒေါ်စိန်ပေါက် ရှောက်သီးဆေးပြား လာရောင်းတုန်းက
သူနဲ့အတူ ပါလာတဲ့ …သူ့သူငယ် ဆိုလား ဘာဆိုလား..
ခပ်နွဲ့နွဲ့ လူချောကြီးနဲ့ သေချာ ထည့်ပေးလိုက်တာပဲ ကို …။
အဲ့သူငယ်က ငယ်ငယ်က ဘတ်စကတ်ဘော ပွတ်တယ်ဆိုလားပဲ…
ကျုပ်ကိုတောင် လာ အာဟိ …နေလို့ တော်ရေ့ …..
ဒေါ်စိန်ပေါက် ၀ီစီမှုတ်ယူရတယ်…. ဟွန့် …
(နာတော့ ဘာဘီကျူဖြစ်တော့မယ် …)
ကိုရင့်ပို့စ်လေးဖတ်ပြီး ပထမတော်တော် ရီမိတယ်ဗျာ။
နောက်တခုကတော့ ဖဲ ပေါ့ဗျာ။
ဒါပေမဲ့ အိမ်ထဲမှာဘယ်တုန်းကစမှန်းမသိဘဲ အခြားသူလုံးဝမပါဘဲ ဖဲ ကစားကြတယ်။
အဲဒီမှာ ကျနော်က တမျိုးဗျ။ ဟိုး တဲရော့အကြောင်းတွေ အဘဆရာကြီးမရေးခင်ကတည်း
က ဘယ်လိုဖြစ်မှန်းမသိဘူး၊ ကျနော်ဖဲ ထုတ်တွေနဲ့ နမိတ်ကောက်လေ့ရှိခဲ့တယ်။
၅၂ ချပ်ဆိုတဲ့ ဖဲချပ်လေးတွေဟာ သီတင်းပါတ် ၅၂ ပါတ်ကိုကိုယ်စားပြုတယ်လို့
ဒါပေမဲ့ ၅၂ အမြှောက် ၇ ရက် ဆိုရင် ၃၆၄ ရက် ဘဲ ဖြစ်နေတော့ လိုသလို ၁-ရက်(သို့)
၂-ရက် ပေါင်းလို့ရအောင် ဂျိုကာ ၂ချပ်ထဲ့တယ်လို့ဖြစ်တယ် မဟုတ်လားဗျာ။
အနီဟာ နေ့ (နေရဲ့အရောင်)၊ အနက်ဟာ(ညရဲ့အရောင်) ဆိုပြီးသတ်မှတ်တယ်ဗျာ။
ဆိုတော့ကာ ဖဲချပ်လေးတချပ်ဟာ သီတင်းပါတ်တပါတ်ကို ကိုယ်စားပြုတယ်လို့စဉ်းစားလို့
အကြမ်းဖျဉ်းတော့ ဒီလိုယူဆတယ်ဗျာ။ ဂဏန်းတန်ဖိုးအရ ကွဲမယ်။
•Hearts: The element corresponding to the suit of hearts is water and the corresponding meanings are love, happiness, friendship, relationships, etc.
ချစ်ခြင်းမေတ္တာ၊ ခင်မင်မှုနဲ့ နွယ်ဆက်တွယ်တာမှုတို့ရဲ့ပါဝင်ပါတ်သက်သောအစိတ်အပိုင်းများလို့ဆိုရမယ်ထင်တယ်။
•Clubs: The corresponding element for the suit of clubs is fire and it represents ambition, business, achievement and success.
•Diamonds: The corresponding element for diamonds is earth and it signifies career and financial concerns.
သူကတော့ အလုပ်အကိုင်၊ငွေရေးကြေးရေးဆိုင်ရာတွေကိုကြည့်တာဗျ။ စီးပွါးရေးအတွက်ပေါ့ဗျာ။
•Spades: The element corresponding to the suit of spades is air and it signifies gossip, upsets, challenges, etc.
ကိုယ်စားပြုသတဲ့ဗျို့။ ကံမကောင်းခြင်းကို ပြပေးမဲ့ လမ်းညွန်ကဒ်တွေဗျ။ ကျန်းမာရေးနဲ့ဆိုင်မယ်ထင်ပါရဲ့။
(ဖဲချပ်က အရုပ်တွေဟာတကယ်ရှိခဲ့တဲ့လူတွေကို ကိုယ်စားပြုတယ်လို့လဲမှတ်သားဘူးတယ်။
Ace ရဲ့ ဟောကိန်းလေး ကြည့်ကြည့်ရအောင်ဗျာ။
1.Hearts Ace =Change in feelings and emotions.Indication ofaguest.
2. Clubs Ace =New things in the offing
3.Diamonds Ace =Start of struggle or conquest
4.Spades Ace=Starting of prosperity
1.အဲဒီလိုဗျာ။ Hearts Ace ဟတ်တစ်ကဒ်ကို ရလိုက်ရင် ခင်ဗျားစိတ်မငြိမ်ဘူးပေါ့ဗျာ။ရီးဇားများချင်မယ်။
2. Clubs Ace ကလပ်(ဗ)တစ်ကိုရရင်တော့ ခင်ဗျား ဘဝတိုးတက်ရေးကလမ်းသစ်ပေါ်ပြီဗျ။
အဲ ဝေးတော့ဝေးသေးတယ်ဆိုပေမဲ့ “မြင်”နေရပြီတဲ့။ရည်မှန်းထားသမျှဖြစ်မယ်လို့ဟောရမယ်ဗျာ။
3.Diamonds Ace သူကတော့လက်ရိုးဗေဒင်ရဲ့ဇနက္ကကိန်းမှာဆို “တည်” ဆိုတဲ့ နေရာပေါ့ဗျာ။
နောက်ဆုံးမှာတော့ ကျောက်–ထီး–နန်း—စံ ပါလိမ့်မယ်တဲ့။
ခုတော့ ကြိုးစားလိုက်အုန်းတဲ့။ ရုန်းကန်လှုပ်ရှားရဆုံးအချိန်လို့ဟောဗျာ။
4.Spades Ace ပြည့်စုံမှုက စ ပြီတဲ့ဗျ။ ငွေလေးဘာလေးစ စုမိပြီ။အိမ်လေးဘာလေး စပိုင်ပြီဆိုတဲ့
အခါများပါဘဲလို့ စားပွဲကိုဘုန်းကနဲ ပုတ်ပြီး ဟောပေတော့ဗျို့။
ကျန်တဲ့ ဂဏန်းတွေတော့ စိတ်ဝင်စားရင် နောက်မှပြောပြပေးပါ့မယ်။
ထူးခြားတာက ကလပ်(ဗ)ဖိုက် ဆိုရင် “ရန်ဖြစ် စကားများကိန်း” ကွ။
မယုံမရှိနဲ့ ဂဠုန်ငါးပိထဲ့ ——ညီလေးရေ။
(ဒီမှာ စာ မသင်တော့ဘဲ ကိုရင်စည်နဲ့ပေါင်းပြီး ဗေဒင်ဟောစားရ မကောင်းရှိတော့မယ် ဟဲဟဲ)
ကိုရင်ကြီးဆရာကိုသစ်မင်းရေ… ခုလို စိတ်ရှည်လက်ရှည်နဲ့ ဗဟုသုတဖြစ်ဖွယ်ကို
၀င်ရောက်ဆွေးနွေးတင်ပြပေးလို့ ကျေးဇူးပါနော့…။ ကိုသစ်လည်း Astrology ပိုင်းမှာ
တော်တော်လေး ထဲထဲဝင်ဝင်ရှိတယ်ဗျာ.. ပညာတွေမရှိူထားပါနဲ့နော်…။ ဖြစ်နိုင်ရင်
ကျနော့်ကိုလည်း ဗေဒင်တွက်ပေးစေလိုပါတယ်..။ ကျနော်ငယ်ငယ်တုန်းက ဖဲဗေဒင်တွက်ဖူးတယ်..
heart – ခံစားမှု ၊ နှလုံးသားရေးရာ
diamond – စီးပွားရေ.. လာဘ်လာဘပေါ့
spade – ဖဲလေးပွင့်ထဲမှာ စပိတ်ကအကြီးဆုံး၊ ဘ၀ရဲ့ အရေးပါတဲ့ အကြောင်းအရာပေါ့
ညှင်းကိုတော့ ကျနော်က ပွားများ စည်ပင်ခြင်းလို့ အဓိပါယ်မှတ်ယူလိုက်တယ်…။
အဲ့လို ကလေးတွေတွေးရင် တွက်ပေးခဲ့ဖူးပါတယ်… ဘာမှမဟုတ်ပါဘူး ပညာရပ်တစ်ခုမဟုတ်ပါဘူး…။
ဒါနဲ့ စကားမစပ် ကိုရင်ကြီးဆီကလည်း အခါသင့်လို့ အခွင့်သာရင် ကျနော် သိချင်တဲ့ ဗေဒင်မဟုတ်တဲ့ Concept ပိုင်းတွေ ပညာယူချင်ပါတယ်သေးတယ်ဗျ…
အဲ့ဒီဖဲဗေဒင်ကို ဘယ်မှာရှာဖတ်လို့ရမလဲ မသိဘူး။ သိရင်ညွှန်ကြပါအုန်း ။ စိတ်ဝင်စားလို့ပါ။ အပျော်ပေါ့ ။ ရံဖန်ရံခါ သူငယ်ချင်းများနဲ့ အပျင်းပြေလေးပေါ့။
ကိုရင် စည်သူ ရေ ကျွန်တော် တောင်းပန်ပါတယ်ဗျာ ဒီပိုစ့်နဲ့တော့ ဘာမှ မဆိုင်ပါဘူး
mandalaygazettemembers@im.partych.at ကို Add ပေးပါလားဗျာ ၊ စုပြီးတော့ ပွါးချင်လို့ပါ..
(သဂျီး တွေ့ရင်တော့ ဘယ်လောက် နှုတ်မလဲ မသိဘူးနော်)
ကိုရင်ချစ်ရင်ထူးရေ.. this man နဲ့ this man တောင်းပန်စရာမလိုပါဘူးဗျာ..
ကိုရင်ပေးတဲ့လိပ်စာကို ဘယ်ကနေ add ရမလဲဗျ… ကျနော်က ဆိုဒ်သုံးတဲ့
ဗဟုသုတနည်းလို့ နားလည်ပေးမယ်ထင်ပါတယ်နော့…။ စုပြီပွားပွား
မစုပဲပွားပွား.. ကိုရင်စည်က ပွားပြီးသားပါပဲဗျာ..:cool:
(သဂျီးကျနော်တို့ကို ပွိုင့်နှုတ်ရင် သဂျီးကို နှုတ်ခမ်းမွှေးပြန်နှုတ်ကြမယ်လေ… ဟီးးး :D)
ရန်ငြိုး ..ချစ်မေတ္တာနဲ့ ပညာ ကို အကြွေးမထားသင့်ဘူးလို့
ဆိုခဲ့တဲ့ ဆြာခ ကို ပြန်လည်အမှတ်ရစေတဲ့ စာ ဖြစ်လို့….
အဲ့လိုချက်ကျလက်ကျ အပီကိုင်တတ်တဲ့ စရိုက်မျိုး ….
ဆြာခ(အစ်ကို့ အဘ) က တယ်အရေးများသကိုးဗျာ ….
စိတ်ခွန်အား တမျိုး ရစေပါတယ်ဗျာ …
စကားမစပ်ဖဲအကြောင်းကိုလည်း တံဆိပ်နဲ့ တကွ
ကိုရင်ဂီ့ရေ… ငွေကြေး၊ ရန်ငြိုး၊ ချစ်ခြင်း၊ ပညာ လေးမျိုးဟာ အကြွေးမထားရဘူးလို့
အဘက ကျနော်တို့ကို စိတ်ဓါတ်ခွန်းအားပေးတဲ့အနေနဲ့ သူကိုယ်တိုင်လည်း ဦးဆောင်
လုပ်ပြနိုင်ခဲ့ပါတယ်…။ သားတပည့်တွေကိုလည်း ဘယ်အခြေအနေဖြစ်ဖြစ် စိတ်ဓါတ်ခိုင်မာစွာနဲ့
ကိုယ့်အပေါ် စော်ကားလာတဲ့လူတွေကို ပြန်လည်တုံ့ပြန်နိုင်ဖို့ လမ်းပြပေးခဲ့ပါတယ်။
(ယောက်ျားကောင်းတွေ ကလဲ့စားဟာ ၁၀နှစ်လည်း နောက်မကျပါဘူး)
အခြေခံလူတန်းစားတွေ စိတ်ဓါတ်မြှင့်တင်ဖို့ စိတ်အာဟာရ တန်းဝင်စာပေတွေကို အဘ
မြောက်မြားစွာ ရေးသားခဲ့ပါတယ်…။ သို့ပေမဲ့ ကိုယ်နိုင်ငံကပေးတဲ့ အမျိုးသားစာပေဆုလေး
တစ်ခုတောင် အသိအမှတ်ပြုတဲ့ အနေနဲ့ မရခဲ့တဲ့ စာပေစိစစ်ရေးတွေအပေါ် ကျနော်တော့
အံ့သြသင့်မိတယ်ဗျာ။ စိတ်လည်းမကောင်းဘူး။ ကဲ.. ထားပါတော့… အခါသင့်လို့ အခွင့်သာရင်
ကိုရင်ဂီ့၊ ကိုသစ်မင်း၊ ကိုကြောင်ကြီး၊ သဂျီးခိုင်နဲ့ ပိုကာတစ်ပွဲလောက်တော့ ဒေါင်းချင်သေးတယ်ဗျ
ပစ်ဖဲတွေ ဘာတွေပစ်လာမလဲ စိတ်လှုပ်ရှားစွာ စောင့်ကြည့်နေမယ့်..
ကျွန်ုပ်၏မြေတစ်ကွက်လုံး ဝယ်လျှင်ပင် သုံး သောင်းနှင့်ပင် ရနိုင်၏။ ယခုမူ မြေတစ်ပေအတွက်
ငွေသုံးသောင်းကို ကျွန်ုပ်က လက်ဖြောက်တီး၍ ယူလိုက်လေ၏။ ဦးစိန်ဖေကြီး ကား ကစားလိုက်
သည်နှင့် ခါးကျိုးသွားသော ရှစ်သုံးလုံး ဖဲထုပ်နှင့် တူ၏။ ကျွန်ုပ်မှာမူကား ကုလားဖန် ထိုးရခက်သော
အေဝမ်းဖဲထုပ်နှင့်တူ၏။ သို့ရာတွင် ကျွန်ုပ်တို့နှစ်ဦးသည် အိမ်နီးချင်းများသာတည်း။
အဲဒီလိုအဖြစ်မျိုးတွေနဲ့ က နေရာတိုင်းလိုလိုကြားဖူးနေပါတယ်။သူ့ မြေကိုယ်ကျော်၊ကိုယ့်မြေသူကျော်
ကိုရင် Google talk မှာ Add ရပါမယ် ခင်ဗျာ ၊ ကိုရင့်ကို စောင့်နေတဲ့သူ တစ်ယောက်ရှိတယ်၊ ကိုရင် မရှိဘူး လား လို့မေးနေလေရဲ့….
စိန်ပေါက်ပေါက်ကတော့ ဘာမှခိုးဘူးနော် (မလစ်ရင် )
ကိုယ့်အ၀ှာကျတော့ နဲနဲမှ အထိမခံဘူး..သူများအ၀ှာကျတော့ လိုက်ပြီးအ၀ှာပြုချင်ကြတယ်..
တစ်ကိုယ်ရေ တစ်ကာယဆို ကိုစည်သွပ်နဲ့လိုက်ခဲ့တယ်ဗျာ..
သားနဲ့ ..မယားနဲ့ ..ဆိုတော့လဲ ပြစ်ထားခဲ့လို့ မကောင်းလို့ သာ
နို့ မို့ ဆို တစ်ရွာတစ်ကျီဆောက်..အဲလေ..တစ်ရွာပြီးတစ်ရွာပတ်လို့ကိုရင်စည်သွပ်နဲ့ အတူတူ ဂန္ဓာရီလှည့်ချင်တယ်
မသွားခင် တော့ နှုတ်ဆက်သွားပါဦး။
အဲဒီမြေတပေဈေးက အခုဆိုရင် သိန်းသုံးရာလောက် တန်နေပြီတဲ့ ကစည်သွတ်ရေ….။ ဂန္ဓာရီခရီး အတွေ့အကြုံ ဝေမျှပါအုံး။။။ သဂျီးက မလိုက်ရလို့ စိတ်ဆိုးနေဒယ်။ သူငရဲပြည် သွားတဲ့အခါ ကစည်ကို အသိမပေးဘဲ တယောက်ထဲကြိတ်သွားမယ်တဲ့…။ သွားသွား သဂျီးရေ ပွိုင့်လေးတော့ ပေးသွားအုံး…။ တော်ကြာ ငရဲကနေ ကပ်ကမ္ဘာ ထရီလျံပေါင်း ဇီလျံခံပြီးကာမှ အကြွေးမပေးလို့ဆိုပြီး ပုဒ်မအသစ်နဲ့ နောက်ထပ် နေပေးရအုံးမယ်။။။
ဒီအချက်ကို ကိုကြောင်လည်း တန်းကနဲမြင်အောင် တွေ့သွားတယ်ပေါ့..
ဟုတ်တယ်နော ..အိမ်ဆောက်ပစ္စည်းနဲ့ မြေတန်ဖိုး ဈေးနှုန်းချင်း အချိုးအစားက
သိပ်မကွာသေးတဲ့ အကြောင်း …။
အိမ်နံရံတခြမ်း ခွာချရမှာက မြေ၁ကွက်စာ ထက် ပိုကုန်ပိုလက်ဝင်မယ့် သဘောကိုး..။
ခုခေတ်များ မြေဈေး သိန်းထောင်ချီ …အိမ်နံရံတခြမ်းပြင်တာ သိန်းဆယ်ဂဏန်း …
လွတ်ရောကျွံရော ရာဂဏန်းပေါ့ ….။
၀ှူး…. သဂျီးခယ်မ ဂီနဲ့ ရ ရင် ဘယ်မှာ ထားရပါ့…..။
မောင်ဂီ နင်က မှတ်ချက်ပေးရင် သဂျီးခယ်မ မပါကြေးလေကွာ…။ ငါ့ဘယ်လို ခံစားရမလဲ..
ကိုရင် ရေ ကျွန်တော့်ငယ်ဘ၀ က အဘ ၀တ္တုတွေနဲ့ ကြီးပြင်းလာရတာပါ
ဖတ်တာမှ အသည်းအသန်ပဲ ၊ အဘ စာထဲက အတိုင်း ကိုယ့်ဘာသာ စကားဝှက်တွေထွင် ဒိုင်ယာရီ ရေးဘူးသေးတယ်
အခု ပို့စ် လေး ဖတ်ရတာ တကယ့် အလွမ်းပြေပါပဲ
ဒါ့ထက် အဘ တပည့် တွေက ဖဲ နဲ့ ပတ်သက်ရင်တော့ တော်တော် ကျွမ်းကျင်ကြမယ်ထင်တယ်နော
ကိုဘလက် နဲ့ ကျွန်တော် ကိုရင်နဲ့ တွေ့ဘို့ပြောထားသေးတယ်၊ ကိုလင်းမြွေလဲ ပါမယ်ထင်ရဲ့ အချိန် ရရင် ပြောပါဦး
စိန်ဖေ ဆိုတဲ့ နာမည် နဲ့ ပတ်သက်လို့ ၊ ဆားပုလင်းနှင်းမောင် ဝတ္ထု တစ်အုပ်ထဲမှာ ၊ အသတ်ခံရတဲ့ သေခါနီး လူ က ၊ မသေခင်မှာ စကားမပီဘဲ သူ့ ကို သတ်တာ “ စိန်ဖေ ” လို့ ပြောတာကို ၊ ကြားလိုက်တဲ့သူ က “ ဇိမ်ဘဲ ” ဆိုပြီး ထင်သွားကြောင်း ၊ ဖတ်ခဲ့ဖူးတာ သတိရမိသဗျာ ။
၀တ္ထုနာမည်က ဆားပုလင်းနှင်းမောင်နှင့် စတုမဟာရာဇ် တဲ့။
အသတ်ခံရတဲ့လူက သေခါနီး သူ့ကို သတ်တဲ့လူနာမည်ကို မပီမသနဲ့ ပြောသွားတာ
စတုမဟာရာဇ် တဲ့။ အမှန်က စံထူးပါတယ်လို့ ပြောသွားတာဗျ။
အဲဒါကို ကျွန်ုပ်တို့၏ ဇာတ်လိုက်ကျော်ကြီး ဆားပုလင်းနှင်းမောင်က
30000အလကားရတာဘဲ မန်းဂေဇက်အဖွဲ့သားတွေကိုမုန့်ဝယ်ကျွေူးလိုက်ပေါ့လေ အစီစဉ်ကောင်းတယ်မဟုတ်လား မန်းအဖွဲ့သူအဖွဲ့သားကိုကိုမမများ
30000အလကားရတာဘဲ မန်းဂေဇက်အဖွဲ့သားတွေကိုမုန့်ဝယ်ကျွေူးလိုက်ပေါ့လေ အစီစဉ်ကောင်းတယ်မဟုတ်လား မန်းအဖွဲ့သူအဖွဲ့သားကိုကိုမမများ ရှင့်